Barcelona oo qorsheeneysa inay la soo wareegto weeraryahan ka ciyaara horyaalka Premier League – Gool FM
(Barcelon) 24 Jan 2022. Barcelona ayaa bilowday inay raadiso dookhyo kala duwan ee dhanka weerarka ah kadib markii Juventus ay diiday inay iibiso weeraryahankeeda Alvaro Morata, sida laga soo xigtay wargeysyada ka soo baxa Ingiriiska.
Barcelona ayaa bilawgii suuqa jiilaalka isku dayday inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Spain ee Alvaro Morata, waxayna markale isku dayga ku celisay kaddib markii uu ka dhaawacmay Ansu Fati, laakiin Juventus ayaa shuruud ku xirtay in marka hore inay hesho badelkiisa kahor inta ayna aqbalin bixitaankiisa.
Sida laga soo xigtay wargeyska Ingiriiska ee The Telegraph, weeraryahanka reer Gabone iyo kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa bartilmaameed u noqday Barcelona, si ay ugu xoojisato dhanka weerarka kooxda inta lagu guda jiro suuqa January.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in weeraryahanka reer Gabon oo ay isku dhaceen macalinkiisa Isbaanishka ee Mikel Arteta ay ka go’an tahay inuu isaga tago Arsenal, sidoo kalena Gunners ay dooneyso inay iska iibiso, si ay uga takhalusto mushaarka faraha badan ee uu qaato, maadaama aysan xilligan ku tiirsaneyn adeegiisa.
Sidoo kale wararka ka imaanaya gudaha Talyaaniga ayaa sheegaya in sidoo kale ay jirto xiiso kaga imaanaya Pierre-Emerick Aubameyang kooxaha Milan, Juventus, Paris Saint-Germain, Marseille iyo Seville.
Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa haatan isku dayaysa inay ka takhalusto xiddiga reer France ee Ousmane Dembélé si ay u hesho lacagta lagama maarmaanka ah oo ay dooneyso inay ku soo iibsato weeraryahan cusub.